Isbeddel la rabo in lagu sameeyo suuqa cayaartoyda Premier League
Kooxaha horyaalka Premier League ee Ingiriiska ayaa lagu wdaaa inay ka wada-hadlaan in isbeddel lagu sameeyo xilliga uu xirmayo suuqa kala iibsiga cayaartoyda, lagana dhigo ka hor inta uusan billaaban horyaalka.
Wakiillo ka socda 20-ka kooxood ee horyaalka ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan kulanka saamilayda horyaalka oo dhacaya toddobada bisha September, ayada oo la rumeysan yahay in inta badan kooxaha ay doonayaan in isbeddelkan la sameeyo.
Suuqa kala iibsiga cayaartoyda aya hadda furan ilaa 31-ka bisha August, oo ah saddex toddobaad kadib billowga horyaalka, waxaana haddii la isku raaco qorshaha cusub uu xirmi doonaa ka hor inta uusan billaaban horyaalka, laga billaabo xilli cayaareedka 2018/2019.
Qorshahan ayaa u baahnaan doona inay taageeraan 14 ka mid ah 20-ka koox ee horyaalka, sii uu u dhaqan galo.
Qorshaha ayaan saameyn doonin kooxaha kale ee dalalka qaaradda Yurub, waxaana ay awoodi doonaan inay cayaartoy ka iibsadaan kooxaha Premier League illaa 31-ka August, markaasi oo suuqa kala iibsiga cayaartoda ee qaaradda Yurub oo idil uu xirmo.